Sokafy ny toetra miafina rehetra an'ny Disney Crossy Road | Androidsis
Ahoana ny fomba hamohana ireo toetra miafina sy miafina rehetra an'ny Disney Crossy Road
Crossy Road dia fahombiazana izay tadiavin'i Disney mihitsy handefa fanontana vaovao fa miaraka amin'ny ankamaroan'ny mpilalao fantatry ny rehetra an'io Liona Mpanjaka io, Toy Story na The haunted house. Fomba vaovao amin'ny ny majika an'ity orinasa ity izay ahafahantsika manakaiky ireo tarehin-toetran'ny Mickey Mouse na lasa Buzz Lightyear handeha mankany amin'ny tsy manam-petra amin'ireo fitsambikinana mahery vaika sy mahafinaritra ireo.
Toy ny voalohany, Disney Crossy Road dia feno fonosana amin'ny karazana endri-tsoratra rehetra. Hiro avy amin'ny Big Hero 6 na ny fihetsem-po rehetra avy any Inside Out, na ireo kilalao avy amin'ny Toy Story. Misy ihany koa ny endri-tsoratra miafina sasany amin'ny endrika sary miafina izay tokony hamenoana iraka sasany hahafahana mamoha azy ireo. Izy ireo dia tsy azo alaina amin'ny milina vola miafina na vidiana amin'ny vola tena izy, fa izy ireo dia azo alaina amin'ny alàlan'ny torolàlana izay ho hitanao etsy ambany izay ahitanao ny fomba hahazoana azy rehetra.
1 Finding Mortimer
2 Paoma, tarts ary serizy
3 Ireo endri-tsoratra miafina tsy mitovy hamaha
Mortimer no hany toetra afaka ny ho hita rehefa niampita ny arabe. Mba hahazoana azy dia mila milalao miaraka amin'i Mickey Mouse ianao, ilay mpilalao fototra ao amin'ny Disney Crossy Road. Amin'ny fotoana tsy ampoizina tanteraka ary mila hilalaovanao kely ianao dia hahita fanadiovana izay hahitanao an'i Mortimer sy ny gitara.
Rehefa hitanao eo imasony izy dia manatona azy ianao ary miandry azy hamoaka ny gitara. Raha vantany vao vitanao izany dia efa anananao hivoha.
Paoma, tarts ary serizy
Ao amin'ny Disney Crossy Roads zavatra sasany toa manangona rehefa milalao amina litera sasany isika. Izy ireo dia zavatra kely izay miseho toy ny vola madinika ary mila manangona ianao mba hahafenoanao fepetra amina toetra tsy fantatra.
Ohatra, raha manangona zavatra 50 ianao (Tsy voatery ho indray mandeha fotsiny, fa azo angonina izy ireo), hamaha ny endri-tsoratra manokana sasany ianao:
Warthog (mikorontana)- Voahidy tamin'ny fanangonana mofomamy 50 rehefa nilalao toy ny Attila
Kapitenin'ny mpiambina (mikorontana)- Voasokatra rehefa manangona paoma 50 ianao rehefa milalao Maximus
Jessie (Tantara Toy)- Azonao atao ny mamoha azy amin'ny fanangonana serizy 50 rehefa milalao toy ny Perdigón
Ireo endri-tsoratra miafina tsy mitovy hamaha
Miseho ny maro amin'ireo litera miafina izay tsy azo idirana rehefa namoha ny endri-tsoratra voafaritra. Ny zavatra sarotra dia ny mahafantatra hoe iza izy ireo ary inona no ataon'ny tsirairay mba hahafahany miditra amin'ireo tarehin-tsoratra izay tsy azo vohana amin'ny vola na vola.
Finnick Elephant (Zootopia)- Tsy mivoha rehefa vita ny "Masters of Disguise". Mety misy ifandraisany amin'ny fiadiana
Gideona (Zootopia) tsy mihidy izy io rehefa vita ny "Top of the Chain Sakafo". Anisan'izany i Manchas sy Andriamatoa Otterton
Chip (Mickey sy namana)- Azo alaina rehefa vita ny «Crazy Critters». Anisan'izany i Dale sy i Gargoyle
Dale (Mickey sy namana): Voasokatra rehefa vita ny "Fab 5" set. Toa i Mickey, Poka Dot Minnie, Donald, Goofy, ary Pluto no mandrafitra azy.
Lenny (Tantara Toy)- Azo sokafana rehefa vita ny seta "Toy Story 1". Ahitana Buzz, Woody, Bo Beep, Slinky, ary Rex
Ilay Prospector (Tantara Toy)- Nivoha rehefa vita ny seta "Toy Story 2". Ahitana Zurg, Wheezy, Babyhead, ary Janey Doll
The Lady Lady- Misy amin'ny ensemble 'Leading Ladies' ao anatin'izany Judy Hopps, Rapunzel ary Joy
Gus (The Haunted House): Azo alaina ao amin'ny sangan'asa "Spooky Spirits". Manana an'i Phineas Plump, Madame Leota ary Executer ianao
Hiccup (The Lion King): Azonao atao ny miditra amin'ny sety "Humble Beginning" izay misy an'i Simba, Nala Rafiki ary Zazu
Zirafy (Ilay Mpanjaka Liona): Voasokatra rehefa vita ny "Big and Long" set. Anisan'izany i Jerry Jumbeaux Jr.
Fred (Big Hero 6)- Tsy voasokatra miaraka amin'ny "Best Friends" napetraka. Ahitana an'i Hiro Hamada, Baymax, Go Go Tomago, Wasabi, ary Honey Lemon
Fred Super Suit (Big Hero 6): eo amin'ny "Super Suit" napetraka niaraka tamin'i Hiro Super Suit, Gogo Super Suit, Wasabi Super Suit ary Honey Lemon Super Suit
Alistair Krei (Hero mahery 6): miaraka amin'ilay andiany "Top Dogs" izay misy ny The King na The King
Rapunzel Braided (misavoritaka): misy amin'ny sety "Heroes tangled" misy an'i Rapunzel, Pascal, Flynn Rider, Maximus ary Vlad
Reny Gothel (misavoritaka): Azonao atao ny miditra amin'ny "Feels Good to be Bad". Ahitana an'i Stabbington Rahalahy 1 sy Stabbington Rahalahy 2
Ilay Mpanjaka (misavoritaka): ho an'ny "Lehilahy mendri-kaja" napetraka. Anisan'izany i Lion Lion
Bobby (mivadika): miaraka amin'ny vondrona Brain Maintenance »ary misy an'i Dave, Paula, Brain Worker ary Bing Bong
Fritz (mivadika): Voahidy miaraka amin'ny "Feeling Emotion" set. Ahitana fifaliana, alahelo, rikoriko ary tahotra
Don (Wreck-It Ralph): misy amin'ny sety "Short and Stout". Anisan'izany Andriamatoa Big
Deanna (Wreck-It Ralph): Voahidy miaraka amin'ny "Citizens of Niceland" napetraka. Anisan'izany i Ralph, Felix, Gene ary Mary
Rancis Fluggerbutter (Wreck- It Ralph)- Tsy voahidy rehefa feno ny "Citizens of Sugar Rush". Princess Vanellope, King Candy, Taffyta Muttonfudge ary Candlehead
Un tarehimarika marobe Ireo hiditra ary tsy ho mora ny mamoha izany, fa mampiseho kosa ny fandraisan'anjaran'ny ekipan'ny fampandrosoana Crossy Road tamin'ity tetik'asa lehibe ity niaraka tamin'i Disney.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Ahoana ny fomba hamohana ireo toetra miafina sy miafina rehetra an'ny Disney Crossy Road
Emerson Peroa dia hoy izy:
Disney Crossy Road dia azo alaina ao amin'ny Windows Phone sy PC.
Valiny tamin'i Emerson Peroa
Jereo raha afaka mamorona torolàlana amin'ny fanavaozana vaovao miaraka amin'ireo endri-tsoratra vaovao ianao. Misaotra betsaka fa tiako ity
Lainga izany. Tsy teo amin'ny arabe ihany no nahitana an'i Mortimer, fa nahita an'i Tiny (jiolahin-tsambo karaiba) niaraka tamin'i Marty sy Cass (Big Hero 6) niaraka tamin'i Hiro Hamada aho.
Dania dia hoy izy:
Ary mihaona amin'ilay zazavavy avy amin'ny tontolon'ny hafahafa jack ianao dia mihaona amin'ny bunny paska
Valio amin'i Dania
Làlana mamakivaky Peroa dia hoy izy:
Salama Dania! Mamaly ny hevitrao dia lazaiko aminao fa tsia, tsy marina izany. Manana ny bunny paska aho ary tsy nandresy an'izany. Ary koa, manana fomba hanehoako aminao aho, fantatrao ve ny fomba?: Ny toetra amam-panahy tsirairay dia manana fomba hamohana azy: ohatra, ny olona iray dia azo vohaina amin'ny masinina na amin'ny $ 0,99, ka tsy hita na aiza na aiza io toetra io, tsy maintsy atao ianao mandresy azy, fa misy iray hafa izay tsy vitananao ny mamaha amin'ny toetra iray fa tsy zavatra hafa, ka io no teôliko. Mba hahazoana ny Bunny Paska dia mila mandoa vola 100 ianao ao amin'ilay masinina na afaka mividy azy amin'ny $ 0,99.
Valiny mankany amin'ny Crossy Road Peru
Oh, ary ankoatr'izay tsy manana afa-tsy Lock, Shock ary ny Bunny Paka amin'ny nofy ratsy alohan'ny Krismasy aho, izany hoe, Jack's Strange World.
Manana tarehin-tsoratra 329 aho ary tsy izy rehetra no azoko tamin'ny vola madinika tao amin'ilay milina mena, nahazo vola madinika 500 koa izy ireo
Google dia manisa ny fampiharana Android 6.000 miliara isan'andro hanaovana malware
Sintomy ary apetaho ny ridao fampandrenesana Samsung Galaxy S6 ho an'ny LG G3